Maxaa ka dhacay Kuuriyada koonfureed markii Cristiano Ronaldo uu tagay oo uu ciyaari waayey? – Gool FM
(Seoul) 01 Agoosto 2019. Taageerayaal u dhashay Waddanka Koonfurta Kuuriya oo aad u carreysan ayaa waxa ay shirkaddii qaban qaabinaysay kulan saaxiibtinimo oo dhex maray Juventus iyo xiddigo laga soo uruuriyay Horyaalka Kuuriya (K League All Stars), kaddib markii ciyaartaasi uusan dheelin laacibka Juventus ee Cristiano Ronaldo.
Heshiiska ayaa dhigayay in Ronaldo uu safto 45 daqiiqo oo kulankaasi ka tirsan, hase yeeshee ma uusan dheelin oo kursiga keydka ayuu fadhiyay.
Taageerayaal gaaraya 70,000 oo kulankaasi soo xaadiray ayaa arrintaasi si weyn uga carooday waxayna sheegeen in tikidhada ay soo jarteen lagu khiyaamay maadaama Ronaldo uusan dheelin, waxaana intii ciyaartu socotay ay ku qaylinayeen Lionel Messi iyagoo ka carreysan Ronaldo.
Dad fara badan ayaa tegay xafiiska shirkadda Myungan ee Seoul, iyagoo dalbaday in magdhaw la siiyo tikidhadoodiina loo soo celiyo oo 1-kii Tikidh ay ku iibsadeen 59 dollar, waxaana kulankaasi uu ku dhammaaday barbaro 3-3.
Saxiixyo ayaa laga qaaday taageerayaashii careysnaa, iyadoo shirkadda howsha qaban qaabisayna ay sheegtay in qorshuhu ahaa in ugu yaraan 45 daqiiqo uu Ronaldo 7 ciyaaro, taasoo ahayd sababta taageerayaal fara badan ay tikidhada u soo iibsadeen.
Garyaqaanno uu ka mid yahay Kim Min Ki ayay la kaashadeen taageerayaasha dalbanaya mag dhawga, waxaana Wargeyska ‘The Sun’ ee Ingiriiska ka soo baxa uu qoray in magdhawga marka la qiimeeyay uu gaarayo 56 milyan oo dollar.
Xayaysiin khiyaano ah ayay sheegeen dadka reer Koonfurta Kuuriya in ay ku gaadeen kooxda Juventus, iyagoo intii ay ciyaartu socotay dhowrayay in Ronaldo la dheelsiiyo, hase yeeshee tababare Mauzio Sarri ayaa sheegay in Ronaldo uusan dheeli kareyn kulankaas, maadaama xoogaa uu nasiinno u baahnaa murquhuna xanuunayeen.